Xisaabinta aasaaska strip ah
Xisaabinta qalabka aasaaska strip
Sheeg nooca aasaas
doorasho 4 doorasho 5
The saf siman G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
baararka taagan V 0 1 2 3 4 5
The dhengedihii xira Z 0 1 2 3 4 5
Dhexroor ee waalka D
oo dhumucdiisuna waxay of looxyada nijaarnimo T
Dhererka looxyada L
Width guddida E
Halabuurka ee la taaban karo
Miisaanka uu leeyahay mid ka mid ah bacda K
Meshkov 1 mitir cubic of taaban karo F
Joogaba, ee la taaban karo miisaan
cement : ciid : dhagax la jajabiyey
Ku qor qiimaha qalabka dhismaha
cement (halkii kiish) M
ciid (1 ton) P
dhagax la jajabiyey (1 ton) B
guddiga (1 cubic meter) W
rakiban (1 ton) N
Ku qor cabbir loo baahan yahay in mm
X - aasaaska width
Y - oo dhererkeedu wuxuu aasaas
A - dhumucda aasaaskii
H - aasaaska height
C - meel fog si ay u dhidibka buundada
S - Tallaabada u dhexeeya xeryahooda
G - The saf siman
V - baararka taagan
Z - The dhengedihii xira
lacagta loo baahan yahay ee sibidhka soo saarka hal mitir cubic of kala duwan la taaban karo xaalad kasta.
Waxay ku xiran tahay calaamad ee sibidhka, fasalka doonayo ee ka dhalanaya la taaban karo, tirada iyo Joogaba, ee buuxiyo.
Waxaa lagama maarmaan ma aha in aan ku celino sida ay muhiim design guriga si loo xisaabiyo lacagta dhismaha qalabka aasaas guriga.
Sababtoo ah qiimaha aasaas mabda'a timaado saddexaad ee qiimaha guriga.
Adeegan waxaa loo fududeeyo doonaa qorshaynta iyo xisaabinta ee aasaaskii guriga. Waxay kugu caawin doontaa si loo xisaabiyo xaddiga la taaban karo, xoojinta, shuttering loox aasaas strip qalabka.
Waxa aad baran kartaa:
degaanka ee aasaaska salka (tusaale ahaan, si loo ogaado xaddiga xireyaashaba si ay u daboosho qaybta hoose dhamaystirtay)
Inta ay la taaban karo aasaas iyo dabaqa guntooda ama dabaqa dhulka hoostiisa ah shubtay (in ay noqon doontaa mid xiiso leh, marka, ay sabab u tahay qalad hoose ee isku dhufashada ma aha la taaban karo oo ku filan)
Xoojinta - tirada filtarka, xisaabinta si toos ah ay miisaan, oo ku salaysan oo dhererkeedu iyo dhexroor
Meesha of nijaarnimo iyo cadadka alwaax ee mitir cubic oo burburiyey
Bedka oo dhan dusha (Xisaab, ee xireyaashaba dhulka hoostiisa) iyo meelaha dhinac iyo saldhig
xisaab Added of kharashka qalabka aasaaska.
Barnaamijku wuxuu isku soo jiidi doonaa aasaaska sawir.
Waxaan rajaynayaa in ay hawsha u faa'iido kuwa dhismaha aasaaska gacmo iyo injineerada-dhisaa wuxuu noqon doonaa.
Tirada iyo qadarka of sibidhka, ciid iyo quruurux samaynta la taaban karo waxaa la siiyaa talo default ah, sida ay ku taliyeen saarayaasha of sibidhka.
Sida qiimaha cement, ciid, quruurux.
Si kastaba ha ahaatee, halabuurka ee la taaban karo dhamaystirtay waa si xoog leh ku tiirsan jajab size of dhagax la jajabiyey ama quruurux, brand cement, xaaladaha u ageegi wiilal iyo kaydinta ay ku. Waxaa la og yahay in inta lagu guda jiro dheerayn cement kaydinta lumiyo hantida iyo tayada cement dilaacda dheeraad ah si degdeg ah ee qoyaan kacsantahay.
Fadlan la soco in kharashka ciid iyo quruurux waxaa loo cayimay in barnaamijka 1 ton. Waratada sidoo kale ku dhawaaqay qiimo halkii mitir cubic of ciid, dhagax la jajabiyey ama quruurux.
Tirada ciid ku xiran tahay in ay asal ahaan. Tusaale ahaan, ciid webiga ka culus tahay xirfado.
1 mitir cubic of ciid culeyskiisu 1200-1700 kg celcelis - 1500 kg.
Iyada oo quruurux iyo burbur adag. Sida laga soo xigtay ilo kala duwan 1 miisaanka mitir cubic of ka 1200 si ay u 2500 kg taas oo ku xiran. Culus - in ka badan ganaax.
Sidaas xisaabo intay ku kacayso per ton oo ciid iyo quruurux laga yaabaa in aad nadiifin ama iibiya.
Si kastaba ha ahaatee, xisaabinta weli ka caawisaa in ay ogaadaan qiimaha lagu qiyaasay dhismaha qalabka buuxiyo dhulka hoostiisa. Ha illoobin silig kale rakiban tolida, ciddiyaha ama boolal waayo sanduuqa battariga ee, gaarsiinta qalabka dhismaha, kharashka kabxidda iyo dhismaha shaqada.
HomeCabirka saqafkeennunasaqafka Gableabat-sibraarmansardsaqafka hiptruss Woodjaranjarada toosan on xarig ahjaranjarada kooreeya DirectJaranjarada leh 90°Jaranjarada 90° a iyo marxaladaha RotaryJaranjarada la 180° wareegJaranjarada wareejiyo by 180° iyo marxaladaha RotarySallaan saddex qdoSallaan saddex qdo iyo marxaladaha Rotaryjaranjarada aarayojaranjarada birtajaranjarada Birta la zagzaagga wejigooda ajaranjarada Birta la ah 90°jaranjarada Birta 90° a iyo sida zagzaagga wejigooda asallaan Birta la 180° wareegjaranjarada Birta wareejiyo by 180°, iyo wejigooda a zagzaaggajaranjarada la taaban karoMarinka aasaasaasaaska deked yaraasaaska bulukeetisiddo la taaban karoxaaridda guntoodaAagga indhahaxisaabinta dadab ahHalabuurka ee la taaban karodurufrakibandusiyeen dhoobadaplasterboard gypsumwallpaperSii kordhaya waxyaabaha sheetgrilles birahajir Woodenderbiga QalabkaQalabka dabaqaDeckingStone xayndaabkabowd birHalka for picket teeddabaq Is-NigeriaVisorsaagga Landbooraanmugga ee ceelkaqodaynaTurfpool qaabBarakaca tubemugga ee taangigafoosto muggamugga ee taangiga a qaabInta ay ciid ama quruurux ku taalloXisaabinta mugga hawada hawo ahaanXisaabinta heerkulka biyahaaqalka dhirta lagu koriyosemicircular Greenhousedhismaha haysaIftiiminta qolkalabisatoXaglaha gooyo TrapezoidXisaabinta qaybtaXaglaha iskutallaabtaCalculator Loan